Shina mpamokatra lafaoro sigara any Chine | Dongfang
Famaritana Ny fizotry ny lafaoro coking dia ny famahana ny famahanana menaka sisa tavela amin'ny mari-pana famahana mafana misy rano mandalo. Mamotika ireo molekiola mavesatra mikroka hidradradradra mahery vaika ao anaty menaka côtô ary coke solika. Ny coker nahemotra dia iray amin'ireo singa ampiasaina amin'ny fanarenana solika maro. Ny famoahana coke avy amin'ny dingan'ny coking fanemorana dia manodidina ny 18% ka hatramin'ny 30% amin'ny lanjan'ny solika sisa tavela amin'ny feedstock, miankina amin'ny variable sy ny compo ...
Ny fizotry ny lafaoro coking dia ahitana ny famahana ny famahanana menaka sisa tavela amin'ny mari-pana famahana mafana misy rano mandalo. Mamotika ireo molekiola mavesatra mikroka hidradradradra mahery vaika ao anaty menaka côtô ary coke solika.
Ny coker nahemotra dia iray amin'ireo singa ampiasaina amin'ny fanarenana solika maro. Ny famoahana coke avy amin'ny dingan'ny coking fanemorana dia manodidina ny 18% ka hatramin'ny 30% amin'ny lanjan'ny solika sisa tavela amin'ny feedstock, miankina amin'ny habetsaky ny fandidiana sy ny firafitry ny feedstock. Ny vokatra azo avy amin'ny lafaoro coking dia 1 tapitrisa ka hatramin'ny 1,2 tapitrisa taonina.
Ny lafaoro coking fanemorana dia iray amin'ireo singa ampiasaina amin'ny fanarenana menaka maro. Ny famoahana coke avy amin'ny dingan'ny coking fanemorana dia manodidina ny 18% ka hatramin'ny 30% amin'ny lanjan'ny solika sisa tavela amin'ny feedstock, miankina amin'ny habetsaky ny fandidiana sy ny firafitry ny feedstock.
1,2 tapitrisa t / y Taty aoriana
1 tapitrisa t / y Coker Tapaka
Taloha: Ny lafaoro fiovam-po manamboatra hidrôro
Manaraka: Atmospheric sy Vacuum Distillation Unit
fampihenana Block , Ironisaly , fizarana fanafana , Machine Chill , Railway , Heureur Transit .